Emre Can oo xiiseynaya in markale uu ku laabto Premier League & kooxda uu doonayo inuu ku biiro oo la shaaciyay – Gool FM
(Turino) 18 Oct 2019. Wargeyska “Tuttosport” ee dalka Talyaaniga ayaa wuxuu shaaca ka qaaday in xiddiga khadka dhexe kooxda Juventus ee Emre Can uu xiiseynayo in markale uu dib ugu laabto horyaalka Premier League ee dalka England.
Wararka ayaa waxay intaas ku sii darayaan in xiddiga khadka dhexe kooxda Juventus ee Emre Can uu qorsheenayo inuu ku biiro Manchester United inta lagu jiro suuqa kala iibsiga ee soo aadan.
Emre Can ayaa ka baxay qorshaha macalinka kooxda Juventus ee Maurizio Sarri, kaddib markii uu la soo saxiixday xiddigaha Aaron Ramsey iyo Adrien Rabiot, taasoo soo yareysay fursadaha uu heli lahaa xiddiga reer Germany.
Laacibkii hore kooxda Liverpool ayaa dhowr jeer ee hore muujiyey sida uu kaga niyadjabsan yahay mustaqbalkiisa Juventus, sababa la xiriira fursado la’aanta xilli ciyaareedkan.
Wargeyska “Tuttosport” ayaa xaqiijiyay in Manchester United ay tahay kooxda uu ku sii jeedo Emre Can, haddii uu ka dhaqaaqo Juventus bisha Janaayo ee soo aadan, waxaana loo arkaa inuu badal u noqon karo Paul Pogba oo si xoogan lala xiriirinayo inuu ka tagayo garoonka Old Trafford, maadaama uu xiiso ka helayo Real Madrid.
Si kastaba ha noqotee, Tababaraha reer Norwey ee Ole Gunnar Solskjær ayaa sidoo kale xiiseynaya inuu kala soo saxiixdo Emre Can suuqa furmi doono bisha Janaayo ee soo aadan naadiga Bianconeri.